Mpitantana eo amin'ny sehatra | Reef Resilience
Ao anatin'ny tontolo miova haingana, ny fahafahan'ny vatohara hamaly, hanasitranana ary hampifanaraka amin'ny fanamby ho avy dia ilaina amin'ny ekosistemika an-dranomasina sy ireo vondron-trondro miankina amin'ny tontolo manodidina. Mba hahatratrarana izany, ny tambajotra dia nanohana ireo mpikarakara ny vatohara sy mpikatroka ny haran-dranomasina maherin'ny 25,000 avy amin'ny firenena 80 sy teratany mba hanatrika ny fiofanana an-tserasera sy ny fifanakalozana an-tserasera mba hananana traikefa amin'ny fanombanana ny fiorenan'ny vatohara ary hahazo ny fanoroana ny manam-pahaizana momba ny fampidirana Hevitra momba ny faharetana amin'ny tetikasa eo an-toerana.
Ny tambajotra dia nanome tambabe ny famatsiam-bola ho an'ireo mpandray anjara 50 mba hampitombo ny fampiharana ny tetikasa novolavolaina nandritra ny fampiofanana momba ny Reef Resilience. Hatramin'izao, mihoatra ny $ 95,000 no natokana ho an'ny tetikasa tontosa manerana izao tontolo izao mba hanohanana ny fitantanana mahomby sy ny fiarovana ny haran-dranomasina. Ho fanatanterahana izany dia nanome fanohanana ny mpitantana isika mba hamitana tetikasa izay:
Manamboatra ny fahaiza-manao momba ny haran-dranomasina
Miaraha amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana
Manaova fikarohana momba ny fitantanana informatika
Ampiharo ireo drafitra fitantanana sy tetik'ady
Raha te hianatra bebe kokoa momba ny tetikasa famatsiam-bola voajanahary, dia vakio ny tantara mahomby avy amin'ny Network Members eto ambany.
Fanorenana ny fahaiza-manao momba ny harena an-dranomasina
Ireo tetikasa ireo dia manome fitaovana, fitaovana ary paikady hanatsarana ny fahaiza-manaon'ireo matihanina miasa amin'ny fiarovana ny haran-dranomasina ary ahafahan'izy ireo hampiditra hevitra momba ny fisintonana amin'ny fitantanana eo an-toerana ary hampiroborobo ny fahaizan'ny rafitra haranify.
Darla White dia nizara ny fomba nampiasany fitaovana sy loharanom-pitaovana avy amin'ny fanofanana ny mpanofana amin'ny Reef Resilience hanohanana ny tetikasam-bolany.
Hitady an'i Darla White, Mpitantana ny Harena an-dranomasina ao Hawaii DLNR Division of Resources Resources, Maui. Nandray anjara tamin'ny atrikasa 2011 Training of Trainer ao amin'ny atleta (TOT) izy mba hianatra momba ny fitantanana ny harena voajanahary ary hanamora ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny atrikasa. Taorian'ny atrik'asa TOT, Darla sy i Eric Conklin, mpiara-miasa aminy, nahazo fanampiana ara-bola ahafahana manatontosa atrikasa momba ny harena an-kibon'ny 5 ho an'ireo nosy Hawaiiana, ka tonga any amin'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta 63, manampahaizana momba ny harena an-dranomasina ary ireo mpahay siansa. Tamin'ny alalan'ireny fampiofanana ireny, dia nitondra siansa sy paikady vaovao izy ireo ho an'ireo sampana lehibe voakasika amin'ny fitantanana ny haran-dranomasina (NOAA, ny sampan-draharahan'ny Coral Reef Ecosystem, Hawaii Division of Water Resources) ary ireo fikambanana mpiaro ny fikambanana ao amin'ireo nosy 4. Ny fampiofanana azy ireo dia nahatonga ireo mpandray anjara lehibe mba hianatra momba ny faharetan'ny haran-dranomasina ary ny fampiharana ny drafitr'asam-pitantanana, ary nanampy tamin'ny fanamafisana ny tanjona amin'ny fitantanana ny fanjakana sy ny tontolon'ny asa amin'ny ho avy.
Ireo tetik'asa ireo dia manome hery ny mpikambana ao amin'ny vondrona, ny mpandray anjara, ary ny mpampiasa, mba handray anjara mavitrika amin'ny fanohanana ny haran-dranomasina sy ny tolotra omeny ary hamporisika ny vondrona handray anjara amin'ny tetik'asa hanatsarana ny faharetan'ny haran-dranomasina.
Henoy ity podcast etsy ambany ity mba hihaino an'i Yashika Nandao ny hevi-dehibe amin'ny tetikasam-bola momba ny famatsiam-bola ary inona no nanentana azy hianatra ny fahasimban'ny haran-dranomasina.
Steven Johnson ao Yap, Micronesia, mitarika fikarohana.
Steven Johnson dia miara-miasa amin'ny Diviziona Kalitao momba ny Tontolo iainana ao amin'ny Commonwealth an'ny Nosy Mariana Avaratra (CNMI). Tao amin'ny 2011, dia nandray anjara tamin'ny atrik'asa atleta Pasifika atleta. Taorian'ity fanofanana ity, nanome ny fanomezan-danja ny Steven ny tambajotra izay nahatonga azy hiara-miasa tamin'i Steve McKagan, mpikaroka Biolojista miaraka amin'ny NOAA, hitarika fampiofanana ao Saipan ho an'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina 59. Ny fampiofanana azy ireo dia nampiditra ny mpandray anjara tamin'ireo hevi-dehiben'ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny fiorenan'ny vatohara sy ny faharetana ary nampiofana azy ireo amin'ny fomba fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny haran-dranomasina, ka nitombo ny fandraisana anjaran'ny vahoaka amin'ny fandaharam-panaraha-maso fandrakofana manga ao Saipan. Nandritra ny hetsika fanarenana 2013, dia nisy ny fitomboan'ny tatitra momba ny harivan'ny vatohara vokatry ny fandraisana anjara amin'ny fanofanana. Ankoatra izany, raha niasa i Steven mba hampiditra ny fitsipiky ny fisintahana amin'ny asany, dia mifandray amin'ny Dr. Jeffrey Maynard ary nanao fikarohana an-tserasera izay mitarika amin'ny famoahana lahatsoratra momba ny fanamafisana ny herisetra ao amin'ny gazety lehibe iray.
Fikarohana momba ny fitantanana informatika
Ireo tetik'asa ireo dia manara-maso ny sata sy ny firoborobon'ny rafi-pitaterana haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fandaharam-potoana sy ny fanombanana mba hampahafantarana tsara ny fanapahan-kevitra amin'ny ho avy.
Mpandray anjara avy amin'ny atrikasa Faly eto Madagasikara. Sary @ WCS
Meet Meetahafaly (Faly) Randriamanantsoa. Taorian'ny nanatrehany fampiofanana momba ny Reef Resilience tany Tanzania, dia niaiky izy fa ilaina ny fampidirana ireo fitsipika fanakanana amin'ny drafitra fitantanana efa misy eto Madagasikara. Miaraka amin'ny fanohanana avy amin'ny famatsiam-bola avy amin'ny tambajotra, i Faly dia nitarika ny mpitantana 26, mpanjono, mpizahantany mpizahatany, ary ireo mpandray anjara hafa ao amin'ny 2013 noho ny fampiofanana momba ny faharetan'ny haran-dranomasina, ny fivalanana ny vatohara, ary ny fomba ahafahan'ny manampahefana miasa mba hampihenana ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina.
Vokatr'izany dia nanomboka nampiditra fitsipika sy fiaraha-mientana ho an'ny drafitra fitantanana dimy ho an'ny toeram-ponenana an-dranomasina eto Madagasikara ny vondrona. Milaza i Bemahafaly hoe: "Isan-taona dia manara-maso izy ireo ary miezaka manaraka ny fampidiran-dra hafa." Nampitombo ny fifandraisana teo amin'ireo mpitantana ny fampiofanana. "Talohan'ny fampiofanana," hoy i Faly, "tsy nifanerasera izy ireo. Aorian'ny fampiofanana dia manana fifandraisana isika. Hatramin'ny volana novambra 2013, mbola mitohy hatramin'izao izy ireo amin'ny fifandraisana sy ny fifandraisana. "
Ireo mpandray anjara dia nahita lanjany toy izany tamin'ny fihaonana miaraka aminy fa nanangana komity ara-dalàna izy ireo mba hanaraha-maso ny fahandroana. Ireo mpikambana ao an-toerana ao an-toerana izay nandray anjara tamin'ny fampiofanana dia nanohy nanara-maso ny vatohara ho an'ny hetsika marefo mandritra ny vanim-potoana mafana isan-taona. Ny vondrona dia nanangana pejy Facebook aza mba hizara vaovao amin'ny aterineto samihafa. Rehefa misy ny fiantraikany, amin'ny fahandroana amin'ny mpanjono manimba na tsy ara-dalàna, dia mampita izany amin'ny Facebook izy ireo ary miara-miasa mba handinika sy hikolokolo ny fiantraikany.
Fametrahana drafitra sy tetik'asa fitantanana
Ireo tetik'asa ireo dia mifantoka amin'ny drafitra sy ny paikady fitantanana mba hampihenana ny fiantraikan'ny aterineto eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy hampitomboana ny faharetan'ny haran-dranomasina-ohatra, ny famolavolana drafitra fanavahana ny vatohara, ny rafi-pitiliana aretina, ary ny drafitrasa fanodinana karazana.
Yashika Nand manolotra ny mpandray anjara mandritra ny atrikasa Firaisankinan'ny Fiji Reef Resilience.
Tetikasan'ny Tahirim-bola sy ny Coran
https://reefresilience.org/wp-content/uploads/Yashika-Podcast.mp3manokatra fisie AUDIO
Mivory amin'i Yashika Nand, mpahay siansa an-dranomasina ho an'ny tetikasa Fiji Wildlife Conservation Society Fiji. Nandray anjara tamin'ny Reef Resilience Network tao 2011 izy raha nanolo-tena ny ekipany mba handray anjara amin'ny fiofanana momba ny Reef Resilience of Trainers (TOT) mba hanohanana ny asany ao amin'ny tambajotra an-drenivohitr'i Fiji ao an-drenivohitra (FLMMA). Nandritra ny fizotry ny TOT, Yashika dia nahazo fampiofanana momba ny famolavolana tambajotra MPA, marary momba ny haran-dranomasina, ary niasa tamin'ny manam-pahaizana mba hamorona rafitra iray ho an'ny drafitra fanakanan-bidy izay azo ampifanarahana amin'ny ankamaroan'ny vondrom-piarahamonina.
Taorian'ny fandaharan'asa TOT, Yashika sy ny ekipany dia nampiantrano ny atrikasa FIZAHAN'NY FIZAHAN-KEVITRA 2 androany ho an'ireo mpiara-miombon'antoka FLMMA sy ireo solontenan'ny vondrom-piarahamonina mba hampahafantatra azy ireo ny fitsipiky ny aretina sy ny haran-dranomasina, ny manofana mpitantana ny fitantanana fitantanana ary ny fampivoarana ny vahaolana momba ny fanavakavahana. Nandritra ny atrikasa dia nampiasa fampahalalana mikasika ny aretin'ny vatohara izy amin'ny lalan'ny TOT mba hampidirana ny solontenan'ny FLMMA sy ny solontenan'ny vondrona amin'ny aretin'ny vatohara. Tamin'ity fampisehoana ity, rehefa nahafantatra ny haran-dranomasina ny mpiara-miombon'antoka FLMMA sy ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina dia nahatonga ny fanahiana sy ny fahalianana hianatra bebe kokoa momba ny antony mahatonga ny aretina coral ao Fiji sy ny fomba fitantanana izany. Taorian 'ny atrikasa dia namolavola solontena avy amin'ny fokonolona 4 ary nanatanteraka drafitra an-dalam-pahavitrihana ho an'ny distrikany mifanaraka amin'ny vaovao sy ny rafitra nianarany avy amin'i Yashika. Ankoatr'ireo, ny solontenan'ny FLMMA sy ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina dia nanao fampiofanana ho an'ny distrika hafa mifototra amin'ny fampahalalana nianarany nandritra ny atrikasa. Taorian'ny fiantsonana TOT ary ny atrikasa Fiji Reef Resilience, Yashika dia nanosika ny hiverina any an-tsekoly mba hahazoana ny mari-pahaizana Masters taorian'ny nampidirany ny marary amin'ny haran-koditra amin'ny lalan'ny TOT. Nandany nandritra ny efa-taona farany tao amin'ny Oniversiten'i Pasifika izy nianatra momba ny fizarana aretina amin'ny haran-dranomasina mba hitarihana ny tetik'asa fitantanana amin'ny ho avy.
Henoy ny resadresaka nifanaovan'i Yashika mba handrenesana hevitra nisongadina tamin'ny tetik'asa famatsiam-bolany sy izay nanentana azy hianatra momba ny haran-dranomasina.